फर्निचर एक्स्पो गुणस्तरीय सामानको पहिचान र खरिद गर्ने उत्तम थलो हो : सिइओ पाण्डेसँगको अन्तर्वार्ता – BUSINESS PATI | Economical Online News Portal
फर्निचर एक्स्पो गुणस्तरीय सामानको पहिचान र खरिद गर्ने उत्तम थलो हो : सिइओ पाण्डेसँगको अन्तर्वार्ता
लोकराज पाण्डे, सिइओ–फर्निवर्ल्ड टेड्रिङ प्रालि
१) फर्निचर तथा फर्निसिङ सामाग्रीहरुको एक्स्पो (२०१९) चलिरहेको छ । यहाँ भिजिट गर्न आउने महानुभावहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
अहिले सातौं फर्निचर एक्स्पो चलिरहेको छ । फर्निचर एक्स्पोमा ग्राहकहरुले नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ मार्केटमा आएको प्रोडक्टहरु, डिउरेबल देखि लिएर आयातित सामानहरु, नेपाली सामानहरुमा पनि नयाँ इनोभेसनहरु भएका सामानहरुको पहिचान गर्न सक्नेछन् ।
अहिले सामानहरुमा टेक्नोलोजी प्रयोग हुदै गएको छ । पहिला सबै हातले गरिन्थ्यो भने अहिले सबै मेसिनहरु प्रयोग हुदै गएका छन् । अहिले नेपाली फर्निचर र विदेशी फर्निचरको जुहारी जस्तो कुन राम्रो भन्ने चलिरहेको छ । फिनिसिङमा पनि राम्रो राम्रो प्रविधि आएको छ । त्यसैले हाम्रो यहाँ आउने दर्शकहरुलाई म के भन्छु भने एक्स्पोबाट एउटा त पछिल्लो टे«न्डहरु बुझन सकिन्छ । विभिन्न डिजाइनबारे बुझन सकिन्छ । र, अत्यन्तै सहज मुल्यमा गुणस्तरीय र टिकाउपूर्ण सामानहरु यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले आजको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा अत्यन्तै उत्तम सामान पाउनका लागि एक्स्पो भिजिट गर्नु लाभदायक हुनसक्छ ।
२) नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सामानहरुमा आत्मनिर्भर हुन सकेको देखिदैन । किन होला ?
आत्मनिर्भर नहुनमा सबैभन्दा पहिलो त हाम्रो यस उधोग वनमा आधारित उधोग हो । हाम्रो टिम्बर स्रोत सिमित छ । प्रविधिमा सिमितता छ । हामी अहिलेसम्म पनि काठमै निर्भर छौ । तर वाहिर तिर काठ नभइकन त्यसको पनि विकल्पहरु आइसक्यो । काठबाट नभइ अन्य धुलोहरुबाट, इस्क्रयापहरुबाट, प्लास्टिकको इस्क्रयाबाट, कागजको इक्रयापबाट त्यसलाई चाँही पेलेर काठको रुपमा रुपान्तरण गरिन्छ । र, अहिले विदेशतिर हेर्नुभयो भने काठहरु कम प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले नेपालमा त्यस खालका विकल्पहरु नभएको हुनाले नेपाली बजार प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर नभएको हो । तर विस्तारै सुधार भइरहेको छ । हामीले काठ बाहेकका अरु विकल्पहरु ल्याइरहेका छौ । सिजन काठहरु ल्याइरहेका छौ । डिटेट काठहरु आइरहेको छ । तर अहिलेको समयमा हामी परनिर्भर नै हौ । ७५–८० प्रतिशत त हाम्रो बजार आयातमै निर्भर छ ।
३) कतिपयले तपाइहरुको एक्स्पो उपल्लो दर्जाका धनीहरुलाई मात्रै केन्द्रित गरेछन् भनेका पनि छन् नी ?
फर्निचर एक्स्पोको मुलभुत उदेश्य भनेको ब्राण्डिङ प्रमोशन गर्ने हो । त्यसको अर्थ आफनो ब्राण्ड भन्ने वित्तिकै तपाइ केही न केहीमा त सफल हुनुहुन्छ । ब्राण्ड भनेको तपाइको गुणस्तर राम्रो छ, वस्तु राम्रो छ भनेर राखिएको हुनाले अलिकति त्यस्तो अनुभुती मान्छेहरुमा भएको होला । मध्यम स्तरको मान्छेहरुलाई अलिक महंगो लाग्यो होला । तर त्यो तुलनात्मक रुपमा तपाईले त्यो चाँडै विग्रने, नासिने कम मुल्य कै सामान हुन्छ । यो भनेको त पुँजीगत सम्पती हो । एकै दिनमा सिद्धिने चिज होइन । ५–१० बर्ष रहन्छ । ५ हजार सस्तो लिँदाखेरी एक बर्षमा विग्रन्छ भने ५ हजार महंगो हाल्नु भयो भने १० बर्ष पनि टिक्छ । त्यसकारण ग्राहकहरुले तुलना गर्नु भयो भने खरिदको लागि यो उत्तम थलो हो । सस्तो पनि हो । तर झट्ट हेर्दाखेरी तपाइको बजेट नै पुगेन भने चाँही अलिकति फोकस नभएको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण एक्स्पो एउटा गुणस्तरीय सामान पाइने र नठगिने थलो हो । सामान नै राम्रो हुने भएकोले अलिकति महंगो पर्न गएको हो ।
४) यस एक्स्पोको मुलभुत विशेषता के हो ?
यसपटकको एक्स्पो पृथक नै छ । यसमा देश–विदेशबाट प्रर्दशनीमा आउनेहरु छन् । मानिसहरुको चासो पनि बढेको छ । एक लाख हाराहारीको भिजिटरको सङख्या छ । हिजोका समयमा गरिएका प्रर्दशनीहरुमा गुणस्तर दिएकै कारण अहिले पनि आर्कषण बढेको हो । यसले पनि आज राम्रो गरिरहेको छ ।
हाम्रो फर्निवर्ड टे«डिङ प्रालिको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले उत्कृृष्ठ सेवा सुविधा र सबै किसिमका फर्निचर समानहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छौ । सामान पनि समयमै दिने गरेका छौ ।
प्रस्तुती : माधव न्यौपाने
प्रकाशित मिति २५ भदौ २०७६